၂၃ နှစ်အရွယ် ဖီလစ်ပိုင်လေယာဉ်မယ်လေး Christine Dacera ရင်နင့်ဖွယ်ဖြစ်ရပ် - The Lobby
၂၃ နှစ်အရွယ် ဖီလစ်ပိုင်လေယာဉ်မယ်လေး Christine Dacera ရင်နင့်ဖွယ်ဖြစ်ရပ်
In: Cele News, International News, News
Christine မသေဆုံးခင်က Makati မြို့ရဲ့ အဆင့်မြင့် ဟိုတယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ City Garden မှာ သူမယုံကြည်ရတယ်လို့ ထင်ခဲ့တဲ့ ယောင်္ကျားလေးသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ New Year Party ကို အတူတူဆင်နွှဲနေခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့်နောက်တစ်နေ့မနက်မှာတော့ ဟိုတယ်အခန်းရဲ့ Bathtub ထဲမှာသေဆုံးမယ်လို့ သူမ တွေးမိခဲ့မယ် မထင်ပါဘူး။ ရဲတွေရဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးချက်အရ အမျိုးသား ၉ ဦးနဲ့အထက် မုဒိမ်းကျင့်ခံခဲ့ရပြီးသေဆုံးမှုအသေးစိတ်ကိုတော့ အလောင်းကို ခွဲစိတ်ပြီးမှ သိရမှာဖြစ်ပါတယ်။
သူမနဲ့အတူ Party မှာရှိခဲ့တဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Galidaက မနက် ၁၀နာရီလောက်မှာနိုးပြီး သူမကို ရေချိုးခန်းထဲမှာတွေ့လို့ အိပ်ပျော်နေတယ်ထင်ပြီး စောင်ခြုံပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်နာရီအနည်းငယ်ကြာတဲ့အချိန်မှာ Christine မူမမှန်ဘဲ ပြာနှမ်းနှမ်းဖြစ်နေတာကို သတိထားမိပြီး ရဲကိုအကြောင်းကြား ဆေးရုံကို အမြန်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပေမယ့် ဆေးရုံရောက်ချိန်မှာတော့ စိတ်မကောင်းစွာ Christine ဟာ သေဆုံးနေခဲ့ပါပြီ။
လက်ရှိမှာတော့ Philippine National Police ရဲ့ ရဲချုပ် Debold Sinasပြောကြားချက်အရ သူမနဲ့ အတူတူ Party မှာရှိခဲ့တဲ့ အမျိုးသားကိုးယောက်ကို ရှာဖွေစုံစမ်းနေပြီး Galida အပါဝင် Christine နဲ့အတူရှိခဲ့တဲ့ အမျိုးသားသူငယ်ချင်း ၃ ယောက်ကိုတော့ ဖမ်းဆီးထားပါတယ်။ စစ်ဆေးချက်အရ သူမအမျိုးသမီးကိုယ်ဟာ စုတ်ပြဲနေပြီး အမျိုးသားတွေရဲ့သုတ်ပိုးကိုလည်း တွေ့ရှိရပါတယ်။
Christine ရဲ့ မိသားစုထွက်ဆိုချက်အရ Party မှာ သူမကို တားမြစ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကို အတင်းသုံးခိုင်းခဲ့ပုံရတယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။ GMA’s News မှာဖော်ပြထားချက်အရ Christine ရဲ့ မိခင်က “ကျွန်မကို သူမ Party သွားဖို့ ခွင့်တောင်းခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မလည်းသွားဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် သမီးက သူ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူတူသွားမှာဖြစ်ပြီး သူတို့ကိုလည်း ယုံကြည်လို့ပါ” လို့ဆိုပါတယ်။ Christine ဟာ သူမအမေကိုအဲဒီညသန်းခေါင်မှာ ဖုန်းခေါ်ခဲ့ပြီး ဖုန်းခေါ်ပြီး ၁၂ နာရီအကြာမှာတော့ သူမသေဆုံးပြီဆိုတဲ့ သတင်း ကို ကြားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
ချစ်ခင်သူတွေကြားမှာ Ica လို့လည်း လူသိများတဲ့ Christine ဟာ University of the Philippines Mindanaor မှာ ဘွဲ့ရခဲ့ပြီး the Philippine Airlines (PAL) မှာ လေယာဉ်မယ်အဖြစ်လုပ်ကိုင်နေသလို ကျောင်းမှာလည်း ငယ်ရွယ်တက်ကြွတဲ့ ကျောင်းဂုဏ်ဆောင်နိုင်သူလေးဖြစ်ပါတယ်။ Miss ပြိုင်ပွဲတွေလည်း ဝင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့သူလေးဖြစ်ပါတယ်။ January3ရက်နေ့မှာတော့ University of the Philippines Mindanao က Ms. Ica was an examplar of honor and excellence in balancing her academics and passion for performing arts. May you rest in peace and the memories of your kind-hearted soul continue to bless the hearts of the people you’ve touched in your remembrance. You will be missed, Ica.” ဆိုပြီး တရားဝင်နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာခွင့်ကို ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
Social Media အသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့ကတော့ အသီးသီးအသုံးပြုကြတဲ့ Social Media Platform တွေမှာ #JusticeforChristineDacera and #ProtectDrunkGirls ဆိုတဲ့ Hastag ကို အသုံးပြုပြီး သူမအတွက် ဝမ်းနည်းခြင်း၊ ယူကြုံးမရဖြစ်ခြင်းနဲ့ ကျူးလွန်သူတွေအတွက် ထိထိရောက်ရောက်အရေးယူရေးအတွက် ပါဝင်လှုပ်ရှားနေကြပါတယ်။ အတူရှိခဲ့တဲ့အမျိုးသားတွေဟာ လိင်တူချစ်သူတွေလို့လည်း သတင်းထွက်နေပြီး တကယ့်ဖြစ်ရပ်သတင်းအစုံအလင်ကို တော့ အလောင်းခွဲစိတ်မှုအပြီးမှာ ဆက်လက်ထုတ်ပြန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Previous Post: စင်ကာပူမှာ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီ
Next Post: ကယ်ဆယ်ရေးလေယာဉ်ဖြင့် ဂျော်ဒန်နှင့် အိန္ဒိယမှ ပြန်ရောက်လာသူ ၆၆ ဦးတွင် COVID-19 ပိုးတွေ့ရှိသဖြင့် အသွားအလာကန့်သတ်ခြင်း တင်းကျပ်စွာဆောင်ရွက်ထား